Afaka ny ho Velona Mandrakizay ve Ianao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Bicol Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Ourdou Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Ianaro ny Tenin’Andriamanitra
Hodinihina ato amin’ity lahatsoratra ity ny fanontaniana mety ho napetrakao. Ho hitanao ato hoe aiza ao amin’ny Baiboly ny valin’izany. Ho faly ny Vavolombelon’i Jehovah hiara-midinika aminao momba izany.
1. Nahoana no toa fohy kely ny androm-piainantsika?
Velona 150 taona ny sokatra sasany ary 3 000 taona ny hazo sasany. Fohy kely ny androm-piainan’ny olombelona raha ampitahaina amin’izany. Tsara lavitra noho ny an’ny sokatra sy hazo anefa ny fiainantsika. Noforonin’i Jehovah Andriamanitra ho afaka hankafy mozika mantsy isika, hanao spaoro, hisakafo, hianatra, hitsangantsangana, ary hifanerasera amin’ny olona. Noforonin’Andriamanitra haniry ho velona mandrakizay isika.—Vakio ny Mpitoriteny 3:11.
2. Afaka ny ho velona mandrakizay tokoa ve isika?
Tsy ho faty mihitsy i Jehovah fa velona mandrakizay. Izy no Loharanon’aina ka afaka manome fiainana mandrakizay ny olona. (Salamo 36:9; Habakoka 1:12) Izany mihitsy no ampanantenainy an’izay mankatò azy. Tsy hihantitra intsony ny olona amin’izany, fa hataony mihatanora indray ka ho salama tsara foana.—Vakio ny Joba 33:24, 25; Isaia 25:8; 33:24.
Nanao fahagagana i Jesosy mba hampisehoana fa azo antoka izany fampanantenan’Andriamanitra izany. Nanasitrana karazan’aretina maro, ohatra, izy ary nanangana ny maty mihitsy aza.—Vakio ny Lioka 7:11-15, 18, 19, 22.
3. Rahoviana isika vao ho velona mandrakizay?
Tsy amin’izao andro feno fijaliana sy herisetra izao isika no tian’Andriamanitra hiaina mandrakizay, fa rehefa lasa paradisa ny tany. Tiany hiadana mantsy isika. (Salamo 37:9, 29; Isaia 65:21, 22) Olona an-tapitrisany koa no hatsangany amin’ny maty amin’izay. Hiaina mandrakizay izy ireo raha mifidy ny hanompo an’Andriamanitra sy hankatò azy.—Vakio ny Lioka 23:42, 43; Jaona 5:28, 29.
4. Inona no tokony hataontsika raha te ho velona mandrakizay isika?
Handray soa ianao raha miezaka hahalala an’Andriamanitra
Andriamanitra ihany no afaka manome fiainana mandrakizay antsika. Tokony hiezaka hahalala azy àry isika ka hifandray kokoa aminy. Oharin’ny Baiboly amin’ny hoe misakafo ny hoe mianatra momba azy. (Matio 4:4) Mahafinaritra ny misakafo, saingy mila miezaka ianao vao mahazo sakafo sy mahavita mikarakara izany. Toy izany koa fa mila ezaka ny mianatra momba an’Andriamanitra. Tsy misy mahasoa kokoa noho ny hoe mifandray aminy sy mahazo fiainana mandrakizay anefa.—Vakio ny Lioka 13:23, 24; Jaona 6:27; 17:3.
Hizara Hizara Afaka ny ho Velona Mandrakizay ve Ianao?
w12 1/10 p. 16-17
Nahoana Andriamanitra no Naniraka An’i Jesosy Tetỳ An-tany?
Hanorina Fanjakana Iray Eran-tany ve Andriamanitra?